News Archives - Sharemal
How To, Knowledge, Lifestyle, News, Tech, World
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က Facebook ရုံးမှာဇူကာဘက်က iPhone တွေမသုံးရ ဆိုပြီးအမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကပြဿနာက Apple CEO Tim Cook ကိုယ်တိုင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Tim Cookက လူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တစ်နေ့ တာလုပ်ငန်းစဉ်မှာ Facebook က ပါဝင်နေပြီး...
Knowledge, Lifestyle, News, Tech, Travel, World
အင်ဂျင်နဲ့ သွားတဲ့ ကားတွေ၊ဆိုင်ကယ်တွေခေတ် ကုန်ပြီလား။ ဟိုးအရင်က အင်ဂျင်ကားတွေ မပေါ်ခင်ကတော့ ရေနွေးငွေ့ တွေနဲ့မောင်းတဲ့ခေတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားတွေ အသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်မောင်းနှင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အင်ဂျင်ကား၊ဆိုင်ကယ်တွေ ပေါ်ပြီးတဲ့ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာ သယံဇာတတွေရှားပါးလာမှူကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ များပြားလာမှူကြောင့်တစ်ကြောင်း လူတွေက အင်ဂျင်ခေတ်ကို နောက်တစ်ဆင့် တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး...
သင်သာသုံးစရာမကုန်တဲ့ ပိုက်ဆံရှိရင် ဘာလုပ်မလဲ၊ သုံးဖြုန်းမလား၊ အလှူအတန်းတွေပဲ ထိုင်လုပ်နေမလား၊ လူသားတွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေ လုပ်နေမလား၊ စီးပွားရေးတွေထပ် လုပ်နေမလား။ ဒီမေးခွန်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ပိုက်ဆံရှိတဲ့အခါကျရင် အဖြေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာလောကရဲ့ဆရာတစ်ဆူဖြစ်သူ Bill Gates ကတော့လမ်းမှာပိုက်ဆံ ကျသွားခဲ့ရင်တောင် ပြန်ကောက်စရာမလိုအောင် ပေါများတဲ့လူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ...
Knowledge, Lifestyle, News, Tech, World
The Boring Company ကိုမြန်မာလို ဘာသာပြန်ရင်တော့ ငပျင်းကုမ္ဗဏီလို့အဓိပ္ဗါယ်ရချင်ရမယ်။ ဒီကုမ္ဗဏီကို Elon Musk က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကပဲ Flame Thrower (မီးသေနတ်) တွေကို The Boring Company က အခုရေပေါင်းများစွာ ရောင်းချခဲ့ပါသေးတယ်။ The...
အောက်တိုဘာ၃၀ရက်နေ့ က ပစ္စည်းအသစ်တွေ မိတ်ဆက်သွားတဲ့ Apple က Macbook Air နဲ့iPad Pro ကိုပြသသွားပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ ဈေးက ထုံးစံအတိုင်း ဒေါ်လာတစ်ထောင်ဝန်းကျင်နဲ့ထွက်လာပါတယ်။ iPad Pro က Tablet သက်သက်အဆင့်တင်မဟုတ်တော့ပဲ အလွယ်တကူ...
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသော ဓာတ်ပုံကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သော Instagramကို ၂၀၁၀ခုနှစ်က Krieger နဲ့Systrom တို့ က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ Facebookက 1Billion နဲ့Instagramကို အပြီးပြတ်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Instagramကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင် တော်တော်များများ...
သင်videoကို ဘာနဲ့ ရိုက်ပါသလဲ။ ဖုန်းနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကင်မရာကြီးတွေကိုင်ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ပူပူနွေးနွေးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ GoProHero7 အကြောင်းသင်ကြားချင်ကြားပါလိမ့်မယ်။ အရင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ hero seriesတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တော်တော်လေးတိုးတက်လာပါတယ်။ သင်youtubeကြည့်ဖူးရင် သိပါလိမ့်မယ်။ Youtube starဖြစ်တဲ့ နေကာမျက်မှန်နဲ့ CaseyNeistat ကတော့ GoProHero7ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ founder ကိုယ်တိုင်နဲ...
ဂျပန်က အွန်လိုင်းမှာ အင်္ကျီရောင်းတဲ့ ကုမ္ဗဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ သူဌေးတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Yusaku Maezawa ကို Elon Musk က ၂၀၂၃ မတိုင်ခင် ပို့ ပေးမယ်လို့ အတိအလင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်သူဌေးဟာ အသက် ၄၂နှစ်ရှိပြီး အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဆေးပန်းချီကားတွေ...